Intsomi ka-Apollo | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | EGrisi
Enye yeentsomi ezibaluleke kakhulu kwihlabathi lakudala yayilelo lika-Apollo, elalimalunga nothixo wamagorha owayengumculi ngexesha elinye kuba wayehlala ekhatshwa ziimosisi kwaye wayekhusela kakhulu imibongo nomculo. Ngomnye wezona zithixo ezihlonishwa kakhulu kwiGrisi yamandulo kwaye enye yezona zinto zixhaphake kakhulu.
Ukuba uyayithanda intsomi yamaGrike, awungekhe uphoswe yile ndawo ilandelayo apho siza kubuza malunga nomfanekiso kaPhoebus (indlela amaRoma awayebazi ngayo obu thixo), Ukubaluleka kwentsomi ka-Apollo, imvelaphi yakhe, ikhondo lomsebenzi wakhe kunye nosapho, phakathi kweminye imiba.
1 Wayengubani uApollo?
2 U-Apollo umelwe njani?
3 Zithini izipho zikathixo uApollo?
3.1 Apollo kunye clairvoyance
3.2 UApollo kunye nezihlabo
3.3 Apollo kunye neMfazwe yeTrojan
4 Usapho luka-Apollo
Ngokwentsomi yamaGrike, uApollo wayengunyana kaZeyus, oyena thixo unamandla waseOlympus, kunye noLeto, Intombi yestitan eyayinqulwa njengothixokazi wobusuku nemini ngenye indlela.
UZeus ekuqaleni wayenomdla ku-Asteria, owayengudadewabo kaLeto, kwaye wazama ukumthatha ngenkani. Nangona kunjalo, ukwazile ukubaleka wajika waba zizagwityi kodwa njengoko obu thixo buqhubeka ukumhlukumeza, ekugqibeleni waziphosa elwandle waguqula wasisiqithi saseOrtigia.
Xa engazange ayifezekise injongo yakhe, uZeus wabeka amehlo akhe kuLeto owayephindisa kwaye ukusuka kolo lwalamano wakhulelwa uApollo kunye newele lakhe uArtemis. Nangona kunjalo, umfazi osemthethweni kaZeus, uHera, wathi akuva malunga nokuzonwabisa kwendoda yakhe, waqala intshutshiso eyoyikisayo nxamnye noLeto kangangokuba wafuna uncedo lwentombi yakhe u-Eileithyia, uthixokazi wokuzalwa, ukuthintela ukuzalwa kwe-titanid.
Kungenxa yesi sizathu sokuba, ngentsomi, uLeto wayesentlungwini eyoyikekayo yeentsuku ezilithoba kodwa enkosi ngongenelelo loothixo abathile ababa nosizi ngoLeto, ukuzalwa kuka-Artemis kwavunyelwa kwaye wakhawuleza waba ngumntu omdala kunina. Ngokuhanjiswa komntakwabo uApollo. Kwaye kwenzeka njalo. Nangona kunjalo, uArtemis wachukunyiswa kukubandezeleka kukanina kangangokuba wagqiba kwelokuba ahlale eyintombi enyulu ngonaphakade.
Kodwa eso siganeko asiphelelanga apho. Ukungaphumeleli injongo yakhe, uHera waphinda wazama ukususa uLeto kunye nabantwana bakhe ngokuthumela i-python ukuba ibabulale. Kwakhona, oothixo baba nosizi kwisiphelo sikaLeto kwaye benza uApollo ukuba akhule ngeentsuku ezine kuphela ukubulala i-monster ngewaka leentolo.
Kuba inyoka yayisisilwanyana esivela kuThixo, u-Apollo kwafuneka enze isohlwayo sokubulala kwaye apho i-python yawa khona, kwakhiwa i-Oracle yaseDelphi. Unyana kaZeyus waba ngumphathi wale ndawo, ukuze kamva uhlebeze uqikelelo ezindlebeni zabavumisi okanye iipythias.
Kodwa ubutshaba bukaHera noLeto abuzange buphele apha kodwa intsomi ka-Apollo ithi bobabini uArtemis kwaye kwafuneka aqhubeke nokuba ngabakhuseli bakanina ngonaphakade, kuba uHera akazange ayeke ukumngcungcuthekisa. Umzekelo, ngokutsho kwentsomi yamaGrike, amawele abulala oonyana abali-14 bakaNíobe, ababehlekisa ngotitan owayengonwabanga, kunye nesigebenga uTitius, ababefuna ukumnyanzela.
U-Apollo umelwe njani?
Wayesoyikwa ngabanye oothixo kwaye ngabazali bakhe kuphela abanokumthwala. Umelwe njengendoda entle, engenantshebe engenantloko entloko ihonjiswe ngesithsaba se-laurel kwaye ezandleni zayo iphethe i-zither okanye uhadi uHermes amnike lona. ngokuxolisa ngokweba inxenye yeenkomo zika-Apollo. Xa waqala ukudlala isixhobo, unyana kaZeus wamangaliswa kukuba ngumthandi omkhulu womculo kwaye baba ngabahlobo abakhulu.
U-Apollo ukwamelwe ekhwele inqwelo yegolide yelanga ukuba amahashe amane amangalisayo ayetsala ukunqumla isibhakabhaka. Ngesi sizathu, ukwathathwa njengothixo wokukhanya, u-Helios enguthixo weLanga. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko zembali bobabini oothixo babonwa komnye, uApollo.
Zithini izipho zikathixo uApollo?
UApollo uhlala echazwa njengothixo wobugcisa, umculo kunye nemibongo.
Kwezemidlalo, isaphetha neentolo.
Unguthixo wokufa ngesiquphe, izifo kunye nezifo kodwa ukwanguThixo wokuphilisa kunye nokukhusela kwimikhosi emibi.
U-Apollo uchongwe njengokukhanya kwenyaniso, isizathu, ukugqibelela kunye nemvisiswano.
Ungumkhuseli wabelusi kunye nemihlambi, oomatiloshe kunye nabatoli.
Apollo kunye clairvoyance
Ngokwentsomi ka-Apollo, lo thixo wayenamandla okudlulisela isipho sobugqwetha kwabanye kwaye kwaba njalo ngo-Cassandra, umfundisikazi wakhe kunye nentombi ka-Priam King wase Troy, awathi wamnika isipho sokuprofeta endaweni yokufumana ukuhlangana okwenyama. Nangona kunjalo, wathi akuba evume kule fakhalthi, intombazana encinci yalukhaba uthando lothixo kwaye yena, eziva enesiphukuphuku, wamqalekisa, ebangela ukuba kungabikho namnye umntu okholelwa oko wayekuqikelele.
Kungenxa yoko le nto xa uCassandra wayefuna ukulumkisa ngokuwa kukaTroy, uqikelelo lwakhe aluzange luthathwe nzulu kwaye isixeko satshatyalaliswa.
UApollo kunye nezihlabo
Ngokwentsomi yamandulo, uApollo naye wayeneziphiwo zokuvumisa, etyhila ebantwini ubunyani bekamva kunye nomlomo wakhe eDelphi (apho wabulala khona inyoka Python) yayibaluleke kakhulu kuyo yonke iGrisi. IOracle yaseDelphi yayikwiziko lenkolo elisezantsi kweNtaba iParnassus kwaye amaGrike aye kwitempile yothixo uApollo eyokufunda ngekamva lakhe ngomlomo kaPythia, umfundisikazi owayenxibelelana ngqo nalo thixo.
Apollo kunye neMfazwe yeTrojan
Intsomi ka-Apollo isixelela ukuba uPoseidon, uthixo weelwandle, wamthuma ukuba akhe iindonga ezingqonge isixeko saseTroy ukuze asikhusele kwiintshaba. Xa ukumkani waseTroy wayengafuni ukuhlawula izithixo, uApollo waziphindezela ngokuthumela isibetho esibulalayo esixekweni.
Emva kwexesha, u-Apollo wangenelela kwiMfazwe yaseTrojan nangona ekuqaleni uZeus wayecele oothixo ukuba bangathathi cala kwimpikiswano. Nangona kunjalo, bagqibela ngokuthatha inxaxheba kuyo. Umzekelo, u-Apollo no-Aphrodite baqinisekisa u-Ares ukuba alwe kwicala leTrojan kuba oonyana ababini baka-Apollo, uHector noTroilus, babeyinxalenye yecala leTrojan.
Kwakhona, U-Apollo wanceda iParis yabulala u-Achilles, kuba nguye owalathisa utolo lwenkosana yeTrojan kwindawo ekuphela kwayo ebuthathaka yeqhawe lesiGrike: isithende sakhe. Wamsindisa u-Aeneas ekufeni ezandleni zikaDiomedes.
U-Apollo wayenamaqabane amaninzi kunye nabantwana. Ukuba nguthixo wobuhle wayenabo abathandana nabesilisa nabasetyhini.
Abathandi bakhe abangamadoda babe:
Kwelinye icala, wayenamaqabane amaninzi amabhinqa awayeza kuba nawo inzala.
Ndikunye no Muse Talía wayene Coribantes
Ndikunye noDríope kuAnfiso
NgoCreusa wazala u-Ion
Ndikunye noCoronis ukuya ku-Asclepius
Nge-nymph uKirene wazala uAreisteo
Ngo-Ftía wamitha uDoro
Kunye noQione wayeneFilamón
Ngo-Psámate wazala uLino
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Intsomi ka-Apollo